Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii ururka dhalinyarada OYSU faraca Ifo oo si fiican u qabsoomay
Shirkii ururka dhalinyarada OYSU faraca Ifo oo si fiican u qabsoomay
Maalin nimadii Jamcaha oo ay taariikhduna kubeegnayd 4/1/14 waxaa shir balaadhan lagu qabtay xerada Ifo ee deegaanka Dhadhaab shirkan oo ay qaban qaabiyeen ururka OYSU faraciisa Ifo ayaa ahaa mid ay kasoo qayb galeeen dhamaan xubnaha OYSU Ifo iyo marti sharaf kale.
Kulanka ayaa furmay abaare 2:00 duhurnimo waxaana sidii caadada ahaydba lagu furay aayadaha qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soo jeediyay Sayid Yuusuf. Sheeka ayaa ayaa dhalintii madasha fadhiday xasuusiyay cabsida Allah wuxuu sidoo kale xasuusiyay waajibaadka saaran ee ah in ay jihaad udiyaar garoobaan.
Intaa kadib waxaa la gudagalay ajandayaashii shirka oo uu shirgudoominayay xoghayaha OYSU Ifo halgame Tamaan Maxamad ugu horayn xoghayaha ayaa soo jeediyay warbixin dhinacyo badan taabanaysay ka dibna wuxuu soo gudbiyay ajandayaash mudan in laga doodo. Qodobada laga hadlayay waxaa kamid ahaa doorashadii ururka OYSU faraciisa Ifo oo xiligeedii lagaadhay waxaana la islaqaatay in mudo 3 bilood ah dib loo dhigo iyadoo lagu aadinayo doorashada guud ee faraca Muftaaxulxoriy.
Sidoo kale waxaa maykarafoonka lagu soo dhaweeyay halgame Cabdi Carab oo kamid ah xubnaha ugu firfircoon ee faraca Muftaaxulxoriya ee kadhisan xerada Ifo wuxuuna kahadlay arimo dhowr ah isagoo dhalintii madasha fadhiday sitoos ah ugu sheegay waxa looga baahanyahay, wuxuuna aad dhalinta ugu baraarujiyay waxbarashada oo ah waxa kaliya ee maanta dunida casriga ah kashaqaynaya. Iskusoo wada duuboo kulankan maanta ayaa ahaa mid muhiimad gooni ah lehaa isagoo ay kasoo qayb galeen dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo sifiican isu waayo waraystay.
Guntii iyo gabogabadii kulanka ayaa soo xidhmay abaare 4:00 galabnimo xiliga africada bari waxaana goobta lagu tukaday jameecaad wayn oo salaadii casar ah.